News | kapil sharma
News | Tag: kapil sharma
मार्च २५ बाट कपिल शर्माको नयाँ शो, पहिलो अतिथि अजय देवगण
एजेन्सी । दर्शकहरुले लामो समय प्रतिक्षा गरेपछि अन्ततः भारतीय कमेडियन कपिल शर्माको नयाँ टेलिभिजन कार्यक्रम संचालन हुने भएको छ । भारतीय सोनी टेलिभिजनबाट प्रशारण हुन लागेको कपिल शर्माको शोको नाम ‘फ्यामिली टाइम विथ कपिल’ रहेको छ ।
नयाँ टेलिभिजन शो लिएर आउँदै कपिल शर्मा
माघ २५ । कमेडियन कपिल शर्मा पुनः टेलिभिजनको पर्दामा देखिने भएका छन् । आफ्ना सहकर्मी सुनिल ग्रोवरसँग झगडा परेपछि कपिलको चर्चित शोबाट सुनिल निस्किएका थिए । त्यससँगै चर्चित शो ‘कपिल शर्मा शो’मा ठूलो धक्का लागेपछि प्राविधिक कारण देखाउँदै बन्द भएको थियो ।
आजभोली के गर्दै छन् कमेडियन कपिल शर्मा ?
जब एक कार्यक्रम सकेर भारत फर्कदै गर्दा आफ्ना सहकर्मी सुनिल ग्रोबरमाथि हातपात गरे, तब कपिलको ‘बुरा दिन’ शुरु भयो ।
‘द कपिल शर्मा शो’ बन्द हुने, यस्ता छन् प्रमुख कारण
मुम्बई । चर्चित भारतीय स्ट्याण्डअप कमेडियन कपिल शर्माले सोनी च्यानलमा सञ्चालन गर्दै आएको ‘द कपिल शर्मा शो’ चाँडै बन्द हुने भएको छ ।
कपिलको शो बन्द हुनबाट बचाइदिए सलमानले !
मुम्बई । आजकाल बलिउडका चर्चित स्ट्याण्डअप कमेडियन कपिल शर्माको समय खराब चलिरहेको छ ।
कपिलको शो मा फर्कंदै यी कलाकार
मुम्बई । स्ट्याण्डअप कमेडियन कपील शर्माको शोमा अब सुनिल ग्रोबर फर्कने विषय हल्लामा सिमित भएको छ ।
कपील शर्माले गरे विवाह, यी हुन् श्रीमती
मुम्बई । कमेडियन तथा टिभी स्टार कपील शर्माले विवाह गरेका छन् ।
कफि विथ करणकाे सेटमै करणसँग कपिल रिसाएपछि...
मुम्बई । करण जौहरको शो कफि विथ करणको विषयमा करण र कपिल शर्मा बिच भएकाे विवाद भनै चर्किएकाे छ ।
‘द कपिल शमा शो’ का बेस्ट कमेडियन कीकुलाई मनपर्दैन यस्तो कमेडी
भारतीय कमेडी सो ‘द कपिल शर्मा शो’ एकपटक फेरिक संकटमा पर्ने अनुमान गरिएको छ । कपिल सोका एक महत्वपुर्ण कमेडियन डा. गुलाटी शो छोडेर जान लागेको बताइएको छ ।
कमेडियन कपिल शर्माको कर्तुत यस्तो हो भन्दै बोले बिएमसीका अधिकारीहरु
कमेडियन कपिल शर्माले बिमएसीविरुद्ध प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई असन्तुष्टि पोखेपछि सामाजिक सञ्जालमा ठुलो खैलाबैला मच्चिएको थियो ।